Adin-Tenirohy: Mametraka an-tSarintany ny Resaka an-tSerasera Miompana amin’ny Fiakaran’ny Vidin’ny Etona Tao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Meghan McDonald
Voadika ny 02 Marsa 2017 13:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, русский, Español
Noho ny fiakaran'ny vidin'ny gazoala tao Meksika, niely ny rotaka ara-tsosialy ary manao izay handrenesana azy araka izay azony natao ny olona na taiza na taiza nisy an-dry zareo: eny an-dalambe, eny am-pivarotana kafe ary nanerana ny media sosialy.
Nahatratra hatramin'ny 20% ny fiakaran'ny vidin'ny akoran'afo – fantatra amin'ny anarana hoe gasolinazo – tamin'ny alin'ny voalohany Janoary. Niteraka fanoherana teny an-dalambe sy an-tserasera isan'andro izany toe-javatra izany.
Iray amin'ny toe-javatra lehibe tsikaritra tamin'ity fifandonana ity ny fielezan'ny tsaho sy ny tenirohy mampiroborobo ny zavatra tsy ara-dalàna tahaka ny fandrobana sy ny halatra. Roa ny zava-kendren'ireo tetipanorona ireo: hamily ny resaka sy hanaratsy endrika ny fihetsiketseham-panoherana. Nisy mihitsy aza moa hafatra manaitaitra nampiarahana tamin'ny toe-javatra sy fihetsiketsehana hafa, tahaka ny sioka efa nofafana hitantsika io anila io, izay navoakan'ny Radio Fórmula izay nohamafisin'ny mpanamarim-baovao taty aoriana fa toe-javatra niseho tany Ejipta.
Nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny 4 janoary 2017, tenirohy roa no nampiasaina: ny #Gasolinazo sy ny #SaqueaUnWalmart (Mandroba Walmart Iray), izay nitombo ho lohahevitra nironana tao Meksika. Ny sary manaraka eto ambany no mampiseho ny fifandraisana eo amin'ny tenirohy isankarazany niseho tao anaty sioka tamin'io daty io. Ny rohy hita amin'ireo tenirohy ireo dia mampiseho ny isan'ny fotoana nampiasaina ny tenirohy roa na mihoatra tao anaty sioka iray, ary ny haben'ny teboka tsirairay dia mampiseho ny hatetehan'ny fampiasana ny tenirohy tsirairay. Ity famakafakana ity dia teraka avy amin'ny sioka mihoatra ny 15.000 notrohina, nivoaka ary nampitain'ny kaonty mihoatra ny 10.000.
Ny kisarisary ihany koa no mamela antsika hanondro ireo tenirohy hafa nampiarahana tamin'ny #SaqueaUnWalmart, izay mampihevitra fa tetipanorona nampiasaina io hidirana tao anatin'ny resaka. Niavaka manokana tamin'izany ny tenirohy #Hail100cia (filalaovanteny midika hoe “hail ciencia” na “arahabaina ny siansa”). Io tenirohy io dia nampiarahana tamin'ny vondron-kaonty mpisera Twitter nifandrindra tamin'ny fivoahan'ny #SaqueaUnWalmart ary niroso tamin'ny famoahana ny tenirohy vaovao toy ny #GolpeDeEstadoMX (Fanonganam-panjakana ao amin'i Fanjakan'i Mexico).